Uyivula njani iWindows XP Task Manager | Iindaba zeGajethi
Uyivula njani iWindows XP yoLawulo loMsebenzi
Umbulali weviniga | | software, Windows
Hoy masibone ngokukhawuleza indlela yokuvula iWindows XP Task Manager. Ukwenza njalo, kuya kufuneka ucofe amaqhosha aliqela ngaxeshanye kwaye uMphathi uya kuvula ngokuzenzekelayo.
POkanye ukuba awazi, xa ubona into efana ne «key1» + «key2» + «key3» emelwe, into abakuxelela yona kukuba kufuneka ucofe izitshixo ezintathu ezibonisiweyo ngexesha elinye. Ke ukuba ufumana i-Ctrl + Alt + Del kweminye imiyalelo, into ekufuneka uyenzile kukucinezela amaqhosha "Control", "Alt" kunye no "Del" ngaxeshanye.
PUkuvula uMphathi weSebenzi kufuneka sicinezele ngokuchanekileyo indibaniselwano endiyisebenzisileyo kumzekelo wangaphambili ukuze ucinezele "Ctrl" + "Alt" + "Del" kwaye iwindow iya kuvulwa ibizwa "Windows Task Manager".
Aixesha elinako yenza imisebenzi emininzi kuMlawuli njengokuqalisa kwakhona ikhompyuter xa ibanda, ukuvula usetyenziso olungaphenduliyo, ukujonga ukusetyenziswa kwememori, njl. Siza kubona yonke into kwizifundo ezilandelelanayo. Kude kube ngoko, imibuliso yomdiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyivula njani iWindows XP yoLawulo loMsebenzi
Izimvo ezi-31, shiya ezakho
Ndivula njani umphathi womsebenzi kodwa ngaphandle kwe-ctrl + alt + sup?
Molo Eduar, ukuvula umphathi womsebenzi ngaphandle kokucinezela ukudityaniswa kwamaqhosha onokuya kuwo kwimenyu yokuqala emva koko ubaleke kwaye ekugqibeleni uchwetheze taskmgr.exe kunye nomphathi womsebenzi baya kuvela kwiscreen.
Molo, jonga, ndizama ukufikelela kwiakhawunti yomlawuli kodwa andazi ukuba njani. Ikhompyuter yeyesibini kwaye ibisiza njalo. Ukungena kwikhompyuter kufuneka ndingene kwiakhawunti yomsebenzisi kwaye ayindiniki ithuba lokungena kwiakhawunti yomlawuli. Ngenxa yoku ndicinga ukuba andinakungena kwisithunywa kwaye ndinomhla nexesha elingalunganga kwaye ayindivumeli ukuba ndiyitshintshe. Ndiyabulela kakhulu
Umphathi wam umsebenzi akanayo inkqubo, ukusebenza, njl. okanye ukhetho lweemenyu zefayile
Njani ndibenza ukuba bavele? Ndicela uzame yonke into, ndinqwenela ukuba kubonakale kuphela umsebenzi kunye nebhokisi enesimo
Ukwenza inkqubo, ukusebenza, njl. ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukucofa kabini kumda we «isikwere esincinci», ngale ndlela ungabona kwaye uzifihle iithebhu.
Ndinombuzo. / Ndiyifaka njani umphathi womsebenzi kwiWindows XP kwakhona. I-alt + yokulawula + ukucima indibaniselwano yesitshixo ayisebenzi. Kananjalo ayinakuvulwa ekusebenzeni kwimenyu yokuqala. Kwaye i-taskmgr.exe yayo ephumezayo ayibonakali kwiHard Drive. Xa uzama ukufikelela usebenzisa ikhibhodi Umyalezo ubonakala usithi umphathi womsebenzi ukhubazekile ngumlawuli.
Ndinayo nengxaki yokungakwazi ukuvula kumphathi womsebenzi naphina, nceda undincede: S.
1- Ctrl + Alt + (Del okanye Del) (kuxhomekeke kwibhodibhodi)
2.- Qala> Qalisa> taskmgr.exe> ​​Kulungile
Kwi-bar yomsebenzi (Yiyo yonke ibar apho ukuqala kunye newotshi zibekwe khona kwaye apho sivula i-intanethi, iinkqubo njl njl ziyancitshiswa) Cofa ekunene emva koko nomphathi womsebenzi.
Ukuba awungekhe uyithande loo nto, yeka indlela ekumangalisa ngayo ...
a B C D E F G sitsho
Ngawaphi amaqhosha endiya ngqo kumphathi womsebenzi ukuba ndiqhagamshelene ne-domain, kuba iya kuvula iwindow apho kufuneka ndikhethe khona umphathi.
Ndingena njani kumphathi womsebenzi ngaphandle kokuvela kwefestile. Ngaba ikhona enye indibaniselwano yesitshixo?
UNCEDO OLUGQWESILEYO KAKUHLE KAKUHLE UKUGCINA INDLELA
Hee, maqabane, ndiyabulela ngobumbano lwenu kwangethuba.Ndizifundile iikhomenti zenu kwaye zigqwesile kodwa khange ndikwazi ukusombulula ingxaki ye-taskmrg.exe kuba andizukuba nayo nayiphi na indlela. Ndizamile ukuyifaka kwakhona kwi-xpCD disk kwaye ayisebenzi. Ndicinga ukuba ndiyilahlile emva kokufaka inkqubo yomqhubi okanye yokuhlaziya umqhubi.Masiqhubeke siphanda ukuba sonke siyafunda, enkosi nonke.
molo jonga ndinengxaki efanayo ne-enry andazi ukuba ungayilungisa njani ukuba ungandinceda ndingayixabisa
nguwuphi umahluko ekusebenziseni ukunqunyanyiswa nokungasebenzi kunye nenketho yokucima ibha yemenyu
Rolo uyi groso! Ndinengxaki efanayo ne-hjsahjdsajh kwaye andifumananga sisombululo kwi-intanethi .. Undisindisile. Enkosi kakhulu mdala ..
qalisa ukuqhuba iTaskmgr.exe
ukuba isiphi isitshixo asihambi / simatsha.
Andifuni eso sitshixo kodwa enye kuba ndiyayazi loo nto kwaye kufanelekile ukukhupha iintsana
Ndizama ukuwenza la manyathelo kwaye ithi lento "Umphathi womsebenzi ukhubazekile ngumlawuli" Ndincede Nceda!
Inkwenkwezi ekhanyayo sitsho
umbuzo, i-firefox yam ayisebenzi kwaye ndizama ukwenza njengoko ubonisile kodwa ikhompyuter yam ayinayo i-del okanye i-del, ndingayenza ngenye indlela?
Andikwazi ukuvula umphathi womsebenzi nangayiphi na indlela xa ndizama kubonakala ngathi okwesibini izakuvulwa kodwa ayivuli nantoni na endinokuyenza
Ndenza ukumiswa kweqhosha elifanayo kodwa akukho nto kukho umphathi kwi-pc yam othintele imiyalelo kwaye ndaye ndasusa i-icon esebenzayo kwiqhosha lokuqala ukuze ndingakwazi ukuqhuba i-taskmgr.exe nangayiphi na indlela. ngoku ndingena windows (F8) kwimodi ekhuselekileyo xa ndivula kwaye ukusuka apho ndifumana umlawuli kodwa xa ndifuna ukungena kwipaneli yokulawula umatshini useta kwakhona. Ndizamile nakwi windows windows ndikhangela i-taskmgr.exe kwaye xa ndizama ukuyiphumeza indixelela ukuba ivinjiwe ngumlawuli. nasiphi na esinye isisombululo?
Molweni kubo bonke ndinengxaki nomphathi wezinto andazi ukuba kwenzeke ntoni kodwa i-icon yomphathi omnye uvele kwibar yomsebenzi, andikwazi ukuyikhupha apho xa ndiphawula isondele iphinde iphume xa ndingafaki nto kunye ne icon ehlala ibonakala kodwa akukho nto konke konke kwaye andisafumani mphathi wefestile yomsebenzi ndingathanda ukususa i icon engezantsi kwaye iwindow yomlawuli iphume nceda undincede ndilahle ithemba.
UJan Carlos sitsho
Molo, ingxaki yam ikumanejala ophetheyo ndicinezela ctrl + alt + sup ndifumana ibhokisi apho kubonakala ngathi icima i-pc yam kunye nezinye kodwa umphathi wempahla ubonakala ngathi uvaliwe kwaye akandivumeli, sele ndicaphukile kuba Ngamanye amaxesha ndifuna ukucima amaphepha axhonyiweyo kwaye abayi kundivumela ukuba ndincede ...
Madoda, i-SOLUTION yi-MALWAREBYTES, ayiyi kundivumela ukuba ndenze enye into, ivaliwe, andinakuba ... ndibeka i-MALWAREBYTES kwaye YASOMBULULA YONKE INTO !!!!!!!
A ... Ndilibele ukuthi kuloo pc ndibeke windows XP Pro, indiqale phantsi qho emva kwemizuzu emi-2, khumbula ... ungachukumisi nantoni na kwirejista okanye nantoni na ... sispyware esenza yonke into ... khumbula ... MALWAREBYTES
Endaweni yokuvela nge-ctrl + alt + sup, iyandisebenzela nge-ctrl + shift + escape. Ndingayitshintsha njani le nto? Enkosi ukusukela ngoku
Ungawubeka njani umfanekiso kwisiginitsha yakho yeWindows Live Hotmail